११० दिनदेखि रहस्यका रहेको सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युलाई लिएर नयाँ खुलासा – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/११० दिनदेखि रहस्यका रहेको सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युलाई लिएर नयाँ खुलासा
काठमाडौं । गएको ११० दिनदेखि रहस्यका रुपमा रहेको सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युलाई लिएर नयाँ खुलासा भएको छ । यसलाई प्रहरीले एउटा प्रमुख खुलासा मानेको छ । एम्स प्यानलले आफ्नो रिपोर्टमा ज्यान लिएको सम्भावनालाई अस्वीकार गरेको छ ।
इन्डिया टिभीसँग कुरा गर्दै एम्सको फोरेन्सिक विभागका प्रमुख डा. सुधीर गुप्ताले भने, ‘यो स्पष्ट जीवनत्यागको मामला हो । सुशान्तको ज्यान लिइएको छैन ।’ यद्यपि यो आधिकारिक रूपमा सीबीआईले पुष्टि गरेको छैन ।
अगष्ट २१ मा सुशान्तको लाश परीक्षण रिपोर्ट छानबिन गर्न डा. सुधीर गुप्ताको नेतृत्वमा ५ एम्स चिकित्सकहरुको टोली गठन गरिएको थियो । यसले २८ सेप्टेम्बरमा सीबीआई समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्‍यो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार टोलीले भिसेरामा कुनै बस्तु भेटिएन ।
स्रोतका अनुसार रिपोर्टले मुम्बईको कपुर अस्पतालका डाक्टरहरुलाई क्लीन चिट दिएको छैन, जसले सुशान्तको लाशको परीक्षण गरेका थिए । वास्तवमा सुशान्तको लाश परीक्षण कपुर अस्पतालका डाक्टरहरूले गरेका थिए ।
पछि यसको विधिलाई प्रश्न गरीयो । रिपोर्टमा सुशान्तको घाँटीका निशानमा केहि पनि उल्लेख गरिएको थिएन । मृत्युको समयसमेत उल्लेख गरिएको छैन । यसपछि, सीबीआईले एम्सको साथ अनुसन्धान गर्ने निर्णय गर्यो ।
करिब तीन महिना अघि, मुम्बई प्रहरीले भिसेरा रिपोर्ट पनि जारी गर्‍यो । सुशान्तको भिसा लाश परीक्षणपछि कलिना फोरेन्सिक ल्याबलाई जाँचको लागि दिइयो । प्रयोगशालाले आफ्नो रिपोर्टमा मृतक अभिनेताको शरीरमा कुनै शंकास्पद रासायनिक वा त्यस्तो असर गर्ने बस्तु भेटिएको छ भनेर गरिएको दावालाई अस्वीकार गर्‍यो ।
रिया चक्रवर्तीका वकिल सतीश मानशिन्देले एम्सको रिपोर्टमा बयान जारी गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी सीबीआईको आधिकारिक बयानको लागि पर्खिरहेका छौं । रियाको तर्फबाट हामी लगातार भनिरहेका छौ कि सत्यलाई कुनै पनि अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिदैन । हामी सत्य, सत्यमेव जयतेमा अटल छौं ।’